Home Wararka Berri ma noqon doontaa Markii ugu horreysay ee la doorto Madaxweyne...
[XOG] Berri ma noqon doontaa Markii ugu horreysay ee la doorto Madaxweyne aan laaluush bixin
Wararkii ugu danbeeyay ee aan ka heleyno ololaha Doorashada Musharaxiinta aya sheegaya in musharaxiin kooban ay bixiyeen lacago laaluush ah Doorashada loo ballansan yahay maalinta berri ah oo taariikhda tahay 15 May 2022.
Musharaxiinta Farmaajo, Sharif Sheekh Axmed, Kheyre iyo Saciid Deni aya bixiyay lacago ay ugu yeereen sooryo sida Xildhibaano la hadlay MOL ay noo sheegeen iyagoo rajeynaya in codkooda uga bedeshaan.
Xildhibaanada la hadlay MOL aya sheegay in Musharaxiinta bixisay lacagta aanay lahayn rajo badan oo dalkaan loogu aamini karo masiirkiisa.
Xidhibaanada qaar aya sidoo kale MOL u sheegay in Musharaxiinta ka dalbadeen in lacagaha loogu shubo koontooyin Bangi, balse ay musharaxiinta ka biyo diideen arrintaas. Xildhibaanada aya ka cabsi qaba in la siiyo lacago been abuur ah oo la sheegay in lasoo geliyay magaalada Muqdisho si loogu qaldo Xildhibaanada.
Haddaba sida Xildhibaanada ay aaminsan yihiin waxaa maalinta berri ah suurto gal ah in goobta Doorashada lagu doorto Musharax aan bixin wax laaluush ah.
Previous articleXildhibaan 15ka May 2022 Xannibaadda Naga Qaad oo Noo Dooro mid Kheyr Qaba oo Tijaabsan..
Next articleFarmaajo oo gaaray Afisyoone iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashada
Farmaajo oo ku goodiyay in uu gabi ahaanba hogaanka AMISOM ceyrinayo
Duqa Muqdisho oo aan Weli Garan Mas’uliyaddiisa Kuna nool Waayihii Hogaamiye...